निर्वाचन क्षेत्रमा जनतासँग छलफल गरिरहेका बेलायती सांसदको हत्या « Nepali Digital Newspaper
१३ मंसिर २०७८, सोमबार
निर्वाचन क्षेत्रमा जनतासँग छलफल गरिरहेका बेलायती सांसदको हत्या
२९ आश्विन २०७८, शुक्रबार १६:३३
घटना र विचार, न्युज डेस्क !
बेलायतका एक सांसदको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरिएको छ । कन्जरभेटिभ सांसद सर डेभिड एम्सको बेलायतस्थित एसेक्समा चक्कु आक्रमणबाट मृत्यु भएको हो ।
स्थानीय एक चर्चमा भएको उक्त घटनापछि प्रहरीले एक सङ्कास्पद अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीले अभियुक्तबाट एक धारिलो चक्कु बरामद गरेको छ भने यस मामलामा ती एक जनाबाहेक अन्य कसैको खोजी गरिरहनु आवश्यक नरहेको जनाएको छ ।
घटनाको बेला साउथेन्ड वेस्टका सांसद सर डेभिड आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकहरूसँग अन्तर्क्रियात्मक भेटघाट गरिरहेका थिए । बीबीसीले जनाएअनुसार यस्तो अवसरमा जो-कोही सर्वसाधारण मानिसले आफ्ना सांसदलाई नजिकबाट भेट्न सक्छन् ।
सांसद सर डेभिडमाथि चक्कु प्रहार भएको घटनाबारे जानकारी प्राप्त हुनेवित्तिकै प्रहरी घटनास्थलमा पुगेका भए पनि प्रहरी पुग्नुअघि नै उनको घटनास्थलमै मृत्यु भइसकेको थियो ।
४० वर्षसम्म संसद् सदस्य रहेका ६९ वर्षीय सांसद डेभिड एम्स पाँच सन्तानका पिता थिए । उनी पहिलो पटक १९८३ मा बैसिल्डनबाट सांसद चुनिएर आएका थिए ।
१९९२ मा आफ्नो सिट जोगाउन सफल भएपछि पार्टीभित्र उनको प्रतिष्ठा निकै चुलिन पुग्यो । सन् १९९७ मा उनले आफ्नो क्षेत्रनजिकको साउथेन्ड वेस्टबाट चुनाव लडे र विजयी बने ।
सांसद सर डेभिड एम्स गर्भपतनविरुद्ध अभियान चलाउने र जनावरहरूको मुद्दामा खुलेर बोल्ने नेताका रूपमा परिचित थिए ।
पछिल्लो पाँच बर्षमा बेलायतमा सांसदको हत्या भएको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि २०१६ मा लेवर पार्टीका सांसद जो कोक्सको वेस्ट यार्कशायरमा हत्या भएको थियो, जहाँ उनी पनि ‘कन्स्टिच्युएन्सी सर्जरी’ (निर्वाचन क्षेत्रको चिरफार) कार्यक्रममै सहभागी थिए ।
थाइल्याण्डबाट चीन पुऱ्याइएपछि माओवादी नेता पुनको स्वास्थ्यमा सुधार
थाइल्याण्डबाट उपचारार्थ चीन पुऱ्यााइएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनको स्वास्थ्यमा क्रमिक रुपमा सुधार देखिएको छ । गत
गङ्गालाल अस्पतालमा पनि पीसीआर परीक्षण शुल्क रु. एक हजार
शहीद गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र बाँसबारीमा गरिने पीसीआर परीक्षण शुल्क अन्य सरकारी अस्पतालसरह रु एक हजार कायम गरिएको छ । सरकारी
एमाले अध्यक्षमा केपी ओली र भीम रावलको उम्मेदवारी दर्ता
तस्बिर : रासस नेकपा (एमाल) को अध्यक्षका लागि केपी शर्मा ओली र भीम रावलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । एमालेको
‘भारतपरस्त गठबन्धन’का अश्लील तमासाहरू !
रामदेव अहिले प्रचण्डका महान् ‘क्रान्तिकारी’ गुरु बनेका छन् । वास्तवमा यो त्यति उदेकलाग्दो कुरा होइन किनभने यी दुवैजना व्यक्तिगत फाइदाको
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रधानसेनापतिबीच भेटघाट
झापामा बस दुर्घटना, एकको मृत्यु २३ जना घाइते
सूचना विभाग दर्ता नं. ४८४-०७४/७५
सञ्चालक एवम् प्रधानसम्पादक : देवप्रकाश त्रिपाठी
फोन नं : सम्पर्क : ९८५१०२२५८७
© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित Nepali Digital Newspaper